Looking for unique food travel experiences? How about bugs & grubs? | Culinary
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Culinary » Ufuna okwehlukile kokuhamba kokudla? Kuthiwani ngezimbungulu & grubs?
Ufuna okwehlukile kokuhamba kokudla? Kuthiwani ngezimbungulu & grubs?
Uma ufuna ukuvakasha kokudla kokuzijabulisa, nazi ezinye zezinto eziphambili ze-buggy wormy ongazidla emhlabeni wonke.
Izinambuzane nama-grub ukudla okuthandwayo nokujwayelekile emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Ngikhumbula uhambo oluya eNingizimu Korea lapho sithatha isikebhe esiya esiqhingini futhi lapho sehla, kwaba nephunga elibi emoyeni. Ingabe bekungimi ngedwa engikubonile, ngoba bekungabonakali ukubamba ukunaka komunye umuntu. Ngenkathi sihamba emigwaqweni, iphunga laqina futhi laqina, ngakho-ke ngangazi ukuthi sisendleleni efanele yokuthola umthombo wephunga. Futhi lapho babekhona - lapho amehlo ami ahlangana nomuzwa wami wokuhogela njengoba ngangigqolozele kubhasikidi omkhulu wama-grub ashubile.
Ngibuze umqondisi wethu wezokuvakasha ukuthi ngabe yilokho ebengicabanga ukuthi bayikho yini, futhi wahleka wathi yebo, asithenge ezinye ukuze uzame. Zithandwa kakhulu emabhawa, ngoba zihamba kahle kakhulu neziphuzo. Kulungile, ngiyacabanga ukuthi angisiyena lo mjaho, kepha uma ukhona, nazi ezinye zezinto eziphambili ze-buggy wormy ongazidla emhlabeni wonke.
I-Afrika: Izimbungulu Ezinukayo
Kukholwe noma ungakukholwa, izimbungulu ezinukayo empeleni zifana nokunambitheka kwama-apula. Zingadliwa ziqonde njengesinongo noma zisetshenziswe njengokunambitheka kwezinto ezifana nesitshulu. Kuzona zombili lezi zimo, ayabiliswa, futhi kungaleso sikhathi sokupheka lapho ekhulula khona ukunuka kwawo njengecebo lokusinda. O, kuhle ... zama izimbungulu ezincane.
I-Australia: AmaGrubs Witchetty
Izibiliboco zasemaphandleni ziyingxenye yomndeni wenyama yehlathi. Abanye bayayithanda iluhlaza - ukunambitha njengama-alimondi, kanti abanye bayayithanda iphekwe - baphuma benambitha njengenkukhu eyosiwe. Ama-innards? Hhayi-ke, abukeka njengamaqanda aqotshiwe. Ngabe siyaqhubeka?
ICambodia: Izicabucabu Ezithosiwe
Kungani izimbungulu eziningi kangaka e-Asia zikhulu kangaka? Ngokufana nentethe, lezi zigcawu ezinkulu zinenyama eningi kunentethe futhi ziza ngokumangala lapho uluma kuyo (kufana nentethe) - udaka olunsundu oluqukethe amaqanda, indle nama-innards. Ngicela ungidlulisele isitsha. Imvamisa kuhlotshiswa ngoshukela, usawoti kanye ne-MSG bese kuthosiwe ngegalikhi. Kulungile, leyo ngxenye izwakala kahle, empeleni.
IJapane: Ama-Wasp Crackers
Lokho nje ongakulindela, laba baqhekezi ngeminyovu ehlanganiswe kubo ngaphambi kokuba ibhakwe. Noma cabanga ngekhukhi le-chip chip, ngaphandle kwama-chip chocolate ayi-wasps. Lezi zinyovu zinezintambo ezinamandla, ngakho-ke singathemba nje ukuthi zinqunywe amandla ngaphambi kokuba zibhakwe ku-cracker yakho.
EMexico: ICaviar Yezinambuzane
EMexico bakubiza ngokuthi i-escamol - i-caviar yezinambuzane. Yenziwe ngeziphungumangathi zezintuthwane nezibungu ezidliwayo ezivunwa esitshalweni se-mescal noma i-tequila. Ukunambitheka kuchazwa njenge-nutty kanye ne-buttery ngokuthungwa kwe-cottage shizi. Mmm mmm kuhle.
ISouth Korea: Izikelemu Zesilika
Hhayi okwezingubo kuphela, iBeondegi, eyaziwa nangokuthi izibungu zikasilika, iyisidlwana esithandwa kakhulu eSouth Korea. Bayazibilisa, bazifudumeze, bese bazifaka isizini. Ungabathola ezinkantini, kubathengisi basemgwaqweni, cishe kakhulu noma kuphi ezweni. Ukunambitheka kufana nezinkuni sitshelwa. Izinkuni. Ugcine nini ukuhalela izinkuni?
ENingizimu-mpumalanga Asia: Sago Delight
Le grub iyasebenziseka ngokwanele ukuthi ingadliwa iphekiwe noma iluhlaza. Kuphekiwe kuthiwa kunambitheka kakhulu njengebhekoni, kuluhlaza… kahle, kunokuthungwa okunokhilimu - yini enye? Njengamanye ama-grub ase-Asia ajabule, kuvame ukuvuthwa futhi kuphekwe ukwengeza ukunambitheka kwesitsha.
ENingizimu ne-Afrika: iMopane Worms
Ngokwemibiko evela kulabo abake bayizama, iMopand Worms inambitheka kakhulu njengenkukhu eyosiwe. Zinkulu futhi zinamanzi amaningi - ucezu olukhulu lwenyama - futhi zivame ukubhenywa noma zomiswe bese ziphinde zifakwe amanzi emzimbeni futhi ziphekwe noma ngosisi noma utamatisi.
Cabanga nje ngomkhulu - futhi sisho inkumbi enkulu enongwe ngosawoti, i-pepper powder, ne-chili bese ithosiwe kumakhi omkhulu. Kunambitheka okufana nesikhumba se-popcorn esingenalutho, ngaphandle kokuthi uma uluma kuso, ujusi omncane uphuma emzimbeni. I-Gulp. Cela i-Jing Leed ukuzwa lokhu kudla kwe- "hoppy".
Asia Korea Mexico INingizimu Korea
Ezokuvakasha zibulala iVenice kanti nedolobha liyazilwela
Izinsuku ze-New Year Spa futhi zihlala e-Corinthia Hotels
Amazwibela Wokuqala ka-Hyatt Hotel azovela okokuqala kuleli hlobo
Abasebenzi abane bakwaDisney baboshwe kumuntu waseFlorida ...
I-EXPO TURISMO Internacional: Okubalulekile kwePanama...
Ukwelashwa okuthuthukisiwe kokululama kohlangothi
Abagembuli balahlekelwe ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-5.3 emakhasino ase-US ngoMashi
Inketho Entsha Yokuhlola Iziguli Ezisengozini Ephezulu...
Izinkinga Zokukhulelwa Ziphindwe kabili Ngokuhlola Okuhle kwe...
Izingxenye Zemakethe Yesistimu Yeziqandisi Zezentengiselwano kanye...
I-Air Astana igubha iminyaka engama-20 yasungulwa i-Almaty...
Isigaba Esisha Sokuhlolwa Komtholampilo Kwezingane Ze-CNS Tumors
Abantu abangama-200 bakhishiwe, abaningi balaliswe esibhedlela ngemuva ...
Ukugqama Ekusimameni Nobuchwepheshe: Kwamahhala...
I-Zanzibar Ihlala Abavakashi base-Ukraine Abaxakile
I-Cayman Islands Ithola Umfutho Nge-Cruise Tourism
Amahhotela aseMagnuson aqamba i-COO entsha
Ukumasaji Okusha Kwamafutha Embewu Ye-Hemp Yobuhlungu
Ungakwazi yini ukuqagela ukuthi iyiphi Ihhotela lase-UK elingcono kakhulu?
I-Ritz-Carlton Reserve iza eSaudi Arabia
Ucwaningo Olusha lwase-US Lokuqonda Kangcono I-toll Efihliwe ye...
Izibulali magciwane zezandla ezingase zibe yingozi empilweni
I-Industrial Cleaners Usayizi Wemakethe, Yabelana, Imboni...
Kungani i-United Airlines Inenzondo Nezokuvakasha eGuam?
Isimo Esiphuthumayo sase-RwandAir Ngenxa Yesimo Sezulu Esibi e-Entebbe
I-Turks And Caicos Islands Ibona Ukwanda Okukhulu Kwezivakashi...
I-Osteoarthritis of the Knee: Ukwelashwa Okusha Kobuhlungu...
I-Explore Uganda iwina kakhulu ku-International Tourism Film...
I-Radioimmunotherapy Treatment Market Forecast nge...
Kuzodingekani Ukuze Amadolobha Aqine?
Ama-Hotspots Wokuhamba Ikakhulukazi Kwabadala